Liverpool ayaa xaqiijisay guusheedii 3-aad ee tartanka Premier League, kadib markii ay ka badiyeen… – Hagaag.com
Liverpool ayaa xaqiijisay guusheedii 3-aad ee tartanka Premier League, kadib markii ay ka badiyeen…
Posted on 29 Seteembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Liverpool ayaa xaqiijisay guusheedii seddexaad oo isku xigta ee tartanka kubada cagta ee Premier League, kadib markii ay 3-1 kaga badisay kooxda Arsenal kulamadii seddaxaad ee tartanka.
Liverpool ayaa ciyaarta ku soo gashay si xoogan, saddexda weeraryahan, Mohamed Salah, Ferminho iyo Sadio Mane ayaa hogaaminayey weeraro isdaba joog ah oo ay ku doonayeen inay ku furaan goolasha xilli hore, laakiin nasiibka ayaa u dhoola cadeeyay Arsenal, oo goolka koowaad ee ciyaarta u dhaliyay Alexandre Lacazette daqiiqadii 25-aad.
Liverpool ayaa si deg deg ah ku soo laabatay, iyadoo dhalisay labo gool oo u kala dhaliyeen Sadio Mane daqiiqadii 28aad iyo Andrew Robertson daqiiqadii 34aad.
Ciyaarta ayaa ku sii socotay ku dhowaad hal jiho iyadoo ay si cad u haysatay Liverpool oo la arkayay in ay saartay cadaadis sare si Arsenal looga hor istaago kubada, halka Arsenal ay ku ekaadeen oo keliya kubbado dhaadheer oo ay ku raadinaysay dulduleel ay ka hesho dhinaca difaaca Liverpool.
Liverpool ayaa soo afjartay riyadii Arsenal ee inay soo laaban karto oo barbaro ka dhigo karto ciyaarta kadib markii ay dhaliyeen goolkii 3-aad oo loogu mahad celinayo Diego Guetta oo badal ku soo galay daqiiqadii 88-aad.
Liverpool ayaa dhibcaheeda kor ugu qaaday oo gaartay 9 dhibcood oo ay ku hogaamineyso kala horeynta iyadoo ay la wadaagto kooxaha Everton iyo Leicester City, halka dhibcaha Arsenal ku joogsadeen 6 dhibcood.